TweetReach: Ruo Ogologo Oge Ha Olee Tweet Gị Tweet? | Martech Zone
Have nwetụla mgbe ị na-achọ ịma otú Tweet si pụọ na Twitter, onye weghachite ya nke mere ka ọtụtụ ndị nwee nlebara anya, yana akụkọ ndị ọzọ ejiri ya? Nke ahụ bụ ajụjụ m na-ajụ n'oge na-adịbeghị anya site na iji otu peeji nke natara ọtụtụ nlebara anya. Iji TweetReach, M tinyere na URL ahụ na m chọrọ ịhụ akụkọ ihe mere eme ma nweta akụkọ zuru ezu na ebe nchekwa nke Tweet. Iji akaụntụ ọkọlọtọ, enwere m ike ịkọ akụkọ banyere ọrụ 100 gara aga. Site na akaụntụ Pro, enwere m ike ịkọ ihe ruru 1,500!
TweetReach na-enye gị ohere ịmebanye aha URL, hashtags, isiokwu ma ọ bụ ọbụna akaụntụ kwuru na ezigbo oge yana ịkọ akụkọ gbasara data echekwara. TweetReach Pro's adịchaghị akụkọ ihe mere eme Twitter nchịkọta na-enye akuko banyere ihe ndekọ Twitter zuru ezu, na-alaghachi na 2006.
Analytics - TweetReach na-enyocha data Twitter gị maka usoro na ndị ọhụụ na ngwa ngwa na-agbakwunye isi nghọta n'ime iyi nghọta gị.
Reports - TweetReach Pro si mmekọrịta Trackers zuru oke maka nyochaa nsonaazụ na Twitter na ozugbo. Ngwa ngwa wulite akuko ndi mara nma ka Ikesa ndi nketa gi.
Akaụntụ Akaụntụ - Mụta maka ndị na-ege ntị na akaụntụ Twitter na-eji nkọwa zuru oke nke akaụntụ itinye aka. Tụọ ọnụ ọgụgụ aka na njikọ onye na-eso ụzọ.
-ebuli - Tụọ otu ọdịnaya gị si arụ ọrụ, wee hụ ihe Tweets, hashtags na URLs na-emetụtakarị na Twitter. Mụọ ihe na-arụ ọrụ na ihe na-agaghị enyere aka ịmepụta ọdịnaya ka mma.
Companylọ ọrụ Reach, Metlọ Mgbakọ awade a zuru ezu ngwọta na nghọta n'ime Twitter, Instagram, Tumblr na ugbu a Facebook.
Tags: hashtagretweet ọrụọrụ tweetederede tweettweetreachTwitternchịkọta twitterEbe nchekwa twittermkpọsa twittertwitter iru
Sep 30, 2015 na 5:54 PM
Daalụ nke ukwuu maka edemede a dị egwu banyere TweetReach site na Union Metrics! Ọ bụrụ na onye ọ bụla na-agụ nwere ajụjụ ọ bụla, ị nwere ike ịchọta anyị na Twitter @UnionMetrics mgbe niile ma ọ bụ lelee ngosipụta dị ndụ na saịtị anyị maka nyocha Instagram na Twitter iji hụ ihe ị nwetara, na oge gị.
Daalụ ọzọ! Ana m ahụ ibe a ịkekọrịta niile Twitter 🙂
Onye na-elekọta mmadụ na mgbasa ozi | Union metrik
Ọma ndị mere nke TweetReach, Union Metrics Social Suite, na ndị ọzọ